Imisa bilyan ayuu goynayaa GAASKA uu Turkigu ka helay Badda Black Sea? | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Imisa bilyan ayuu goynayaa GAASKA uu Turkigu ka helay Badda Black Sea?
Imisa bilyan ayuu goynayaa GAASKA uu Turkigu ka helay Badda Black Sea?
Recep Tayyip Erdoğan Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, ayaa Jimcihii sheegay inuu 320 bilyan oo mitir kubbo (bcm) oo shidaal ah uu ka helay Badda Madoow, waxaana iminka la sheegay in shidaalkaasi goynayo $80 bilyan oo doollar, sida uu sheegay Fatih Birol, Madaxa Hay’adda Caalamiga ah ee Tamarta (IEA).
Gaaskan oo halka laga helay 2,100 mitir (6,890 cagood) uu ka hooseeyo moolka badda ayaa laga helay Aag Gaaska Sakarya, kaasoo 170 KM u jira xeebta Turkiga ee dhanka Black Sea. Waxaa xusid mudan in ay isla aaggaas ku yaallaan meelo aan weli la baarin.
Gaaskan ayaa la soo saari karaa wixii loo gaaro 2023-ka, sida uu sheegay isla Erdoğan isagoo saadaaliyey inuu dalkiisu noqonayo dal tamarta soo saara oo weliba dhoofiya.
Gaaskan ayaa sidoo kale Turkiga ka caawinaya inuu ka raysto ku tiirsanaanta gaaska Ruushka, Iiraan iyo Azerbaijan oo ay tamarta kasoo degsadaan, taasoo ay sanadkii tegey oo qura uga baxday lacag dhan $41 bilyan oo doollar.
Previous article”Ma waxaad doonaysaa shaqo kuu ”QALANTA” mise midda suuqa taalla?!” – Sheeko micne leh
Next articleImisa Agaasime ayaa ilaa iminka laga eryey Aqalka Madaxtooyada (Tiro taariikhaysan)